PressReader - Isolezwe: 2018-11-08 - Kuzobuyekezwa eyabahlanzayo
Isolezwe - 2018-11-08 - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE
UMNYANGO wezaBasebenzi umemezele ukuthi umkhandlu owengamele umkhakha wezokuhlanza uhlabela phambili ngokubuyekezwa kwemali ezoholwa abasebenza kulo mkhakha.
Okwamanje abasebenzi bahola uR20.74 ngehora emadolobheni njengaseKapa, Greater East Rand Metro, City of Johannesburg, Tshwane naseNelson Mandela.
KwaZulu-Natal bahola uR20 ngehora kanti kwezinye izindawo bahola uR18.90 ngehora.
Ngokwesiphakamiso esisha samaholo esiphakanyiswe enkundleni yamaholo sebezohola uR22 ngehora kuthi kwezinye bahole uR20.07 ngehora.
Zonke lezi ziphakamiso zivele ngesikhathi kunezigcawu zomphakathi eziqale ngoOkthoba 29 ezindaweni ezehlukene okubalwa iRustenburg, Polokwane, Pretoria, East London, Cape Town, Witbank, Bloemfontein, Kimberley naseThekwini.
“Umkhakha wezokuhlanza awunayo inkundla kazwelonke lapho kubhungwa khona ngezindaba zamaholo. Umkhandlu wamaholo useKZN. Ikhomishini i-Employment Conditions Commission iluleka uNgqongqoshe walo mnyango uNksz Mildred Oliphant ngeziphakamiso zemali okumele ziholwe abasebenza kulo mkhakha,” kusho umnyango.
Ngesikhathi sezigcawu zomphakathi izinhlaka ezehlukene ziveze ukuthi uhulumeni unika umsebenzi izinkampani ezingalandeli imigudu efanele yomthetho wabasebenzi, akulalelwa izinkampan ezincane emkhandlwini wamaholo nezinye.
Isitatimende somnyango sithe kuzoqala ukuhlanganiswa kombiko wezigcawu bese zithunyelwa kwikhomishini eluleka uNgqongqoshe ngaphambi kwezichibiyelo ezizokwenziwa emkhakheni wezokuhlanaza bese zisayinwa zibe semthethweni nguNkk Oliphant.
Umnyango uthe ulindele ukuthi amaholo amasha amenyezelwe ngaphambi kokuphela konyaka.